Ogaden News Agency (ONA) – HRW oo Wayaanaha Kucambaaraysay Siday Ula Dhaqmeen Dr. Gudina.
HRW oo Wayaanaha Kucambaaraysay Siday Ula Dhaqmeen Dr. Gudina.
Posted by Dulmane	/ February 28, 2017
Hay’ada xuquuqul insaanka udooda ee Human Rights Watch (HRW) ayaa si kulul uga hadashay xukunkii ay xukuumada wayaanuhu kuriday Dr Marar Gudina oo aha nin aqoonyahan iyo siyaasi ah oo udhashay qoomiyada Oromada.
Uqaabilsanaha arimaha geeska Africa ee hay’ada Human Rights Watch ayaa soosaaray qoraal dheer oo canaan iyo canbaarayn ah kaas oo uu kaga hadlay dhibaatada loogaystay muwaadinkan udhashay Gobolka Oromia kaas oo fikirkiisa oo uu cabiray dartii loo iqaabay.
Qoraalkan kasoo baxay xafiiska hay’ada HRW ee geeska Africa ayaa lagu xusay in xukuumada wadanka Itoobiya ay tahay mida ugu cadaadiska badan wadamada Africa marka la eego dhinaca shacabka iyo siyaasiyiintaba waxaana qoraalka lagu xusay kumanaan shacab iyo siyaasiyiin isugu jira oo kujira jeelasha wadanka Itoobiya.
Sidoo kale waxaa maalin nimadii shalay xukunka Dr Gudina cambaareeyaybaarlamaanka midowga Yurub waxaana qoraalka baarlamaanka EU da kasoo baxay lagu sheegay in taliska wayaanaha laga joojiyo caawimaada lasiiyo si loogu iqaabo dhibka uu gaysanayo.
Dr Marar Gudina ayaa la xidhay kadib markuu kaqayb galay kulan wayn oo arimaha Itoobiya lagaga hadlayay oo ay lahaayeen midowga Yurub wuxuuna Dr Gudina shirkaas kabixiyay warbixin xaasaasi ah oo kusaabsan sida taliska wayaanuhu uu ula dhaqmo shacabka uu gumaysto.
Xukuumada wayaanaha oo ah mid aan xishoonin ayaa bishiiba dhowr jeer loosoo jeediyaa cambaarayn uga timaada hay’adaha xuquuqul insaanka iyo dowladaha caalamka hase yeeshee talika wayaanaha ayaan waxba kasoo qaadin hadalka caalamka.